IPharadesi Pokhara Apartments
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Surendra
I-Paradise Pokhara Apartment's inikezela ngendlu kanokusho yegumbi lokulala elilodwa, eklanyelwe ukujabulisa izivakashi ezifuna ukunethezeka nobumfihlo. Lawa mafulethi anefenisha ephelele anekhishi lawo elinendawo yokudlela, amagumbi okugeza esimanje, amagumbi okulala anomabonakude, i-WIFI enesivinini esikhulu, kanye nombono wezintaba ze-Himalaya kanye ne-Fewa Lake. Sibheke ngabomvu ukukwamukela!
Sinophahla oluvulekile nendawo engadini enkulu ezosetshenziswa izivakashi. Sikhuluma kahle isiNgisi nesiJapanese. Sinesipiliyoni seminyaka engu-15 kulo mkhakha sihlala phesheya kwezilwandle.
Itholakala endaweni yokuhlala ethule, indawo enhle futhi enokuthula ebusuku.
Yebo, ngiyatholakala kunoma yikuphi ukuxhumana nezivakashi zami, ngocingo, nge-imeyili noma mathupha. Futhi, sinikeza izivakashi zethu ikhono lokusebenzisa i-ayina yethu, ihitha, nezinye izinto zasendlini ezengeziwe njengoba zitholakala.
USurendra Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, हिन्दी, 日本語